Diyaarad Siday Xasan Daahir Aweys iyo xubno kale oo Muqdisho ka degtay – SBC
Diyaarad Siday Xasan Daahir Aweys iyo xubno kale oo Muqdisho ka degtay
Magaalada Muqdisho caasimada SOomaaliya waxaa gaartay diyaarad siday Sheekh Xasan Daahir Aweeys oo ka mid ahaa saraakiisha Xarakada alshabaab balse maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Cadaado xarunta Maamul goboleedka Ximin iyo Xeeb.
Xubno uu ka mid yahay madaxweynaha Ximin iyo xeeb ayay siday diyaaradan ka degtay Muqdisho.
Markii ay gaartay Magaalada Muqdisho diyaarada siday Sheekh Xasan Daahir waxaa si rasmi ah ula wareegay ciidamada Gaashaaman ee dowlada federaalka Soomaaliya kuwaas oo aan la aqoon halka ay ula dhaqaaqeen.
Afhayeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa saxaafada u xaqiijiyay safarka Xasan Daahir Aweys ee magaalada Muqdisho iyo weliba in ay la socdaan xubnaha uu ka midka yahay Madaxweynaha Maamulkaasi.
Sheekh Xasan Daahir Aweeys ayaa ogolaaday in uu aado magaalada Muqdisho caasimada dalka ka dib markii uu ka biya diiday maalin nimadii shalay mar ay la shireen wafdi ka socday dowlada iyo odayaal kale.